Vaovao - Tsara kokoa ve ny misotro rano amin'ny vera borosilicate na vera tsotra?
Hatramin'ny nahaterahany, ny teacup vera borosy dia efa nankafizin'ny olona lalina. Izy io dia iray amin'ireo ilaina amin'ny fiainana an-trano, miaraka amin'ny mangarahara avo, fanoherana ny abrasion, fisaka madio, fanadiovana mora ary fahasalamana.
Na izany aza, maro ny fanontaniana napetraka tamim-pahanginana, "Mety ho poizina ve ny kaopy borosilika avo? Ho simba ny vera borosilicate hisotro rano silikona" sns. Ka ny vera borosilicatea avo hosotroina amin'ny farany dia tsy tsara, ity manaraka ity dia horaisiko ianao handika ny vera borosilicate avo.
Ny vera borosilicatea be dia ny fampiasana vera amin'ny toetran'ny toetr'andro mitondra hafanana avo lenta, amin'ny alàlan'ny fanamainana anatiny hahitan-dronono fitaratra, avy eo, karazana fiakaran'ny vidim-piainana, mahazaka hafanana ambony, tanjaka avo, hafanana ambony, hamafin'ny hafanana, hazavana avo transmittance sy High Chemical stable fitaratra manokana, noho ny fahombiazany tsara, ny borosilicate avo vita amin'ny kaopy fitaratra manana ny tombony azo avy amin'ny kaopy fitaratra iraisana.
Kopy fitaratra mahazatra
Ny teacup vera mahazatra dia mora tsy mitovy amin'ny hafanana, ka miteraka hafanana isan-karazany. Noho ny fitsipiky ny fanitarana sy ny fihenan'ny hatsiaka sy ny hafanana, rehefa tsy mitovy amin'ny hafanana sy ny tsy fitoviana lehibe loatra, dia mora vaky ny vera. Mandritra izany fotoana izany, ny hafanan'ny vera tsotra dia tsy avo, ny hafanana be loatra dia mora ihany koa vera vaky
Kopy fitaratra borosilika avo
Ny teacup vera borosilika avo lenta dia vita amin'ny alàlan'ny fitifirana amin'ny hafanana avo, izay afaka mifanaraka amin'ny hafanana ambony sy ny maripana ambany. Ny rano mafana 100 ℃ dia tsy ho tapaka, ary tsy misy fanitarana hafanana sy fihenan'ny hatsiaka izay fahita matetika amin'ny zavatra ankapobeny. Ny tavy, zava-pisotro misy asidra ary ranon-javatra hafa koa dia atolotra tsy misy fofona sy tsy misy tsirony. fitoniana simika, ary tsy misy izany hoe fiempo silikona izany. Ankoatr'izay, ny kaopy fitaratra borosilika avo lenta dia mora diovina ary manaraka ny fenitra azo antoka.